UCarlo ku I-Techdirt ine-athikili yokuthi icala lesenzo sekilasi lizolimaza kanjani kuphela futhi lingayisizi imboni. Anginaso isiqiniseko sokuthi uCarlo angavuma uma kunjalo wakhe idatha ayiphathise i-AOL futhi yakhululwa nge-Intanethi. Wenza ukucabanga ukuthi iGoogle ne-Yahoo! ziyalandela futhi lolu udaba 'lokusesha'.
Akuyona inkinga 'yokusesha' nhlobo, inkinga 'yesibopho'. Kulesi sikhathi esiphila kuso, izigebengu zigcwala ku-inthanethi zizobamba futhi zisebenzise imininingwane yabantu ukuzenzela ubunikazi bazo ngezinjongo ezingekho emthethweni. Izinkampani ziphathiswe imininingwane yethu futhi kufanele ziyivikele. I-AOL ayigcinanga ngokuyivikela, bayikhiphele ngaphandle lapho noma ngubani angayithola khona!